ချို ပေါ့ ကျ (၃) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ချို ပေါ့ ကျ (၃)
ချို ပေါ့ ကျ (၃)
Posted by black chaw on Feb 29, 2012 in Creative Writing, Editor's Choice, Myanma News, Opinions & Discussion, Photography | 43 comments
ကဲ ကျောင်းဒကာ။ တီးတိုင်းရောက်ပြီ…။ ခံတွင်းချဉ်နေတယ်ဗျာ။ လဖက်ရည်ချိုပေါ့ကျလေးတစ်ခွက်လောက်သောက်ကြရအောင်။ လဖက်ရည်သောက်ရင်း ဂျာနယ်ထဲက သတင်းလေးတွေအကြောင်း ပြောကြရအောင်ဗျာ။ ထူးအိမ်သင်ရဲ့ ချိုပေါ့ကျသီချင်းလေး ကို နောက်ခံမြူးဇစ်လေး အဖြစ် ဖွင့်ထားလိုက်ဗျာ။ ရော့ဒီမှာ ကိုငှက်ရဲ့ ချိုပေါ့ကျ သီချင်းလေး အလွယ်တကူသာ ဒေါင်းပြီး ဖွင့်တော့ဗျာ။ ကိုငှက်ကိုလွမ်းလို့ မျက်ရည်ကျရင် ကျုပ်နဲ့ မဆိုင်ဘူးနော်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှင့် ကိုကိုကြီး (Messenger)
အခုတလော ဒေါက်တာတွေဘက် ဓါတ်ကျနေတယ်လို့တော့ မစွတ်စွဲပါနဲ့။
ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ် ရေးခဲ့တဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်အကြောင်းပြောမလို့ပါ။
ဟောကြည့်၊ စိုင်းခမ်းလိတ်ဆိုတာနဲ့ စိုင်းထီးဆိုင်ကြီး ပြေးမြင်လိုက်ပြီ မဟုတ်လား။ ကောင်းရောဗျာ။
ပလက်ဖေါင်းမင်းသား ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးနည်းနည်းညည်းပြမလို့ပါ ကွယ်။
ရေးနေရင်းနဲ့မှ သတိရသွားပြန်ပြီဗျို့။ တိုက်ဆိုင်မှု ဆိုတာကြီးကကြောက်စရာကြီးနော့။
အဲဒီ ပလက်ဖေါင်းမင်းသား ဆိုတဲ့ သီချင်းကိုပဲ ဒေါက်တာဟန်ထူးလွင်တို့ ဒေါက်တာမောင်မောင်ဇော်လတ်တို့ အဖွဲ့လိုက်ကြီး ပြန်ဆိုလိုက်ကြသေးတယ် ဗျ။ ရှောင်လို့ကို မလွတ်နိုင်ပါလား ဒီဒေါက်တာတွေ။ ထားလိုက်ပါဗျာ။ အဲဒီ ဒေါက်တာတွေ။ သီချင်းထဲပါတဲ့ စာသားလေးနှစ်ကြောင်းလောက်ဆွဲယူကိုးကားချင်တာနဲ့ ချူနေရတာဗျို့။
အချိန်တန်တော့ ဘ၀ပေးကုသိုလ် ကိုယ်လည်းပဲ အတွဲလေးနဲ့မိ
မဒီကိန္နရီ စံချိန်မမီပေမယ့် ဟာနေတာကိုမဟာရုံသူဖြည့်ပေး…
ဗိုလ်ထီးကတော့ အချိန်တန်တော့ ဘ၀လက်တွဲဖေါ်တစ်ယောက် ရခဲ့တဲ့အကြောင်း သီချင်းထဲထည့်ဆိုပြီး ကြော်ငြာထိုးခဲ့သေးဗျာ။ အခုတော့ ဗိုလ်ထီးလည်း ဆုံးသွားရှာပါပြီ။
ဆိုတော့ … အဲဒီ ဗိုလ်ထီးလောက်မှ ဆော်မကြည်တဲ့ (မကြည်ဆို ဆော်ရှိတ်ရမယ့်အချိန်မှာ ထောင်ထဲရောက်နေကြရှာတာကိုး ဒုက္ခ တရားတွေပါလားကွယ်တို့) ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ကျွန်တော်တို့ အစ်ကိုကြီးတွေ အကြောင်း ပြောချင်လို့ စကားရေမြောင်းသွယ်နေတာပါကွယ်။
Jan 30 နေ့ထုတ် Messenger ဂျာနယ်ထဲမှာ ပါခဲ့တဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ကိုကိုကြီးနဲ့ အင်တာဗျူးထဲက စကားလေးတချို့ကို နည်းနည်းလေး ဆွဲထုတ်ပြပါရစေဗျာ။ ကဲ ရွာစားရေ အရောက်ပို့ဗျာ။
မေး။ ကျွန်တော်တို့ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်တဲ့အချိန်မှာ ဒေါ်ခင်ကြည်ကို လက်ထပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအကျိုးဆက်အနေနဲ့ ဒီနေ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံအတွက် အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေ ရခဲ့တယ်။ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေထဲမှာ အစ်ကို အပါအ၀င် ကိုဌေးကြွယ်၊ ကိုမင်းကိုနိုင်ရော ကိုယ့်ရဲ့ သွေးထဲကဖြစ်တဲ့ မျိုးဆက်ထားဖို့ အခြေအနေဘယ်တော့လောက် ရှိနိုင်မလဲ သိချင်ပါတယ်။
ဖြေ။ ကျွန်တော်တို့ အင်မတန် အားကျတဲ့ လေးစားတဲ့ အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ကျွန်တော်တို့ လိုက်မမှီတဲ့ အထဲမှာ အဲဒီအချက်လည်း ပါပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ နိုင်ငံရေးလုပ်သက်ကို တွက်ကြည့်တော့ ၁၉၃၆ ငရဲခွေးကြီးလွတ်နေပြီ ဆိုတဲ့ အိုးဝေစာစောင်ကိစ္စက စတွက်ကြည့်ရင် ၁၉၄၇ ကျဆုံးတဲ့အထိ နိုင်ငံရေးလုပ်သက် (၁၁)နှစ်အတွင်းမှာ သူလုပ်သွားတဲ့ ပမာဏတွေက အံ့မခန်းပဲ။ အခုချိန်ပြန်တွေးရင် ကြက်သီးထလောက်အောင် ခံစားရပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ ဒေါ်ခင်ကြည်လည်း အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုက ပါပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ ဗိုလ်ချုပ်တို့ခေတ်က သခင်ပေါက်စ ထောင်ခြောက်လပေါ့။ ကျွန်တော်ဆိုရင် ၁၈ နှစ်ဆိုတော့ တော်တော်တောင် ရာထူးကြီး နေလောက်ပြီ။ ဆိုလိုတာက ကျွန်တော်တို့မှာ ဒေါ်ခင်ကြည်ရှာဖွေနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းမရခဲ့ဘူးပေါ့ဗျာ။
အဖြေစကားလေးဖတ်ပြီး စိတ်တောင် မကောင်းဘူး။ အော် ကျွန်တော်တို့ အစ်ကိုကြီးတွေ လူပျိုလှည့်ဖို့တောင် အချိန်မရခဲ့ကြရှာပါဘူး ကျောင်းဒကာ။ ပျိုရွယ်စဉ်အချိန်တွေကို ထောင်ထဲမှာ ကုန်ခဲ့ကြရရှာတာပါ။ ကိုပါလေရာတို့ ကိုနေးချားကြီးတို့၊ ကိုလင်းဝေကြီး တို့ဆို အဲဒီအရွယ်မှာ ကလေး က သုံးယောက်လောက်ရနေပြီ။ အော် သူတို့က ဆော်ကြည်ဘဲတွေပဲ ကျောင်းဒကာရယ်။
အိုဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုကိုကြီးတို့ကို အားပေးကြရအောင်ဗျာ။ ဗိုလ်ထီးကြီး ပလက်ဖေါင်းမင်းသားထဲမှာ ထည့်ဆိုသလို
မဒီကိန္နရီ စံချိန်မမီပေမယ့် ဟာနေတာကို မဟာရုံသူဖြည့်ပေး…
အချိန်ကတော့ တန်နေပါပြီဗျာ။ ဘ၀ပေးကုသိုလ်လေးကောင်းပြီး အတွဲလေးနဲ့ မိရအောင် နည်းနည်းပါးပါး လူပျိုလေးဘာလေး လှည့်ပေါ့ဗျာ။ ကိုယ့်အစ်ကိုတွေရဲ့ ဥပဓိရုပ်တွေက9လောက် ရှိပါတယ်ဗျ။
မဒီတွေ ကိန္နရီတွေရဲ့ စံချိန်တွေနဲ့ မယှဉ်ထိုးဘူး ဆိုရင် ဗိုလ်ချုပ်လိုပဲ ဒေါ်ခင်ကြည်လို မိန်းမတွေက ရှိနေမှာပါဗျာ။
ကဲ အစ်ကိုတို့ ရေ။ အချိန်ရှိတုန်းလေး ဟေးဟေး။
မေ့နေဦးမယ် ကိုကိုကြီး ရေ။
မင်္ဂလာဆောင်ကျရင် မန္တလေး ဂဇက်က ညီလေးတွေ ညီမလေးတွေကို ဖိတ်ဦးနော့…။
ကိုကိုကြီး နှင့် ဦးခင်ညွှန့်
နှာခေါင်းမရှုံ့ပါနဲ့ ကျောင်းဒကာ။ ခေါင်းစဉ်ဖတ်ပြီး စိတ်မ၀င်စားရင် ကျော်သာ ဖတ်လိုက်တော့ကွယ်။
အပေါ်က ကိုကိုကြီး ကို မေးထားတဲ့ အင်တာဗျူးထဲမှာပဲ နောက်ထပ် အမေးအဖြေလေး တစ်ခုကို ဆွဲထုတ်ပြချင်ပါသေး တယ်ဗျာ။
မေး။ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ လွတ်မြောက်လာတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးခင်ညွန့်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေ နဲ့ အကယ်၍ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းဦးခင်ညွန့်သာ လက်ရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ တစ်နည်းနည်း နဲ့ ပါဝင်လာမယ်ဆိုရင်ရော ဘယ်လို မှတ်ချက်ပေးချင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းဦးခင်ညွန့်ဟာ ကျွန်တော်တို့ အမြင်အရပြောရရင် သူဟာလည်း သားကောင်တစ်ယောက်ပါ။ သူတို့ ပိတ်မိနေတဲ့ စံနစ်တစ်ခုမှာ သူတို့က သားကောင်ဖြစ်သွားတာ။ ကျွန်တော်တို့က ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ကို နိုင်ငံရေးမှာ ၀င်လုပ်ပါ၊ ၀င်မလုပ်ပါနဲ့လို့ ကျွန်တော်က စွက်ဖက်ခွင့်မရှိဘူး။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်က အင်မတန်ရှားပါတယ်။ တစ်လျှောက်လုံးမှာ နိုင်ငံရေးက မစားကောင်းတဲ့ အသီးလို လုပ်တဲ့လူ အင်မတန်နည်းတဲ့ အလုပ်တစ်ခုလိုဖြစ်ခဲ့တယ်။ ထောက်လှမ်းရေးဆိုတာ တပ်မတော်ထဲက နိုင်ငံရေးအင်အားစုတစ်ခုပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ကာလတုန်းကပေါ့။ သူတို့မှာ သူတို့ အတွေ့အကြုံတွေရှိတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ အရည်အချင်းတွေရှိတယ်။ မှန်မှန်ကန်ကန် ဒီမိုကရေစီဘောင်ထဲမှာ ဒီမိုကရေစီအခြေခံမူစံနစ်တွေကို လက်ခံပြီးတော့ နိုင်ငံသားတွေအတွက် နိုင်ငံတော်အတွက် အကျိုးစီးပွားကို ရှေ့ရှု ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က သူတို့ကို ငြင်းစရာမရှိပါဘူး။ အဓိကကတော့ နိုင်ငံသားတွေကပဲ အဆုံးအဖြတ်ပေးရမယ်။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာကို နိုင်ငံသားတွေကပဲ အဆုံးအဖြတ်ပေးရမယ်။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာကို နိုင်ငံသားတွေမှာပဲ တည်ရမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မူပဲ။
ရှင်းပါတယ်နော်။ ဦးခင်ညွှန့် နိုင်ငံရေးလုပ်တာ မလုပ်တာ သူတို့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ လုပ်ချင်လည်းလုပ်ပေါ့ဗျာ။ ဘယ်အရာမဆို ကိုယ်စိုက်ပျိုးသမျှ ကိုယ်ရိတ်သိမ်းကြရတာပါပဲ။
ဦးခင်ညွန့်ကို နိုင်ငံရေး မလုပ်စေချင်ဘူးလို့ ပြောမသွားဘူး။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုအချက်တွေနဲ့ ညီညွတ်သင့်တယ် ဆိုတာလေး ပြောသွားပါတယ်ဗျာ။ ခင်ဗျားသိထားသင့်တယ်ထင်လို့ ပြန်ပြောပြနေတာပါကျောင်းဒကာ။
စကားတစ်ခွန်းကြောင့် ၀ိုင်း နှင့် Heart & Soul ကုမ္ပဏီ လက်တွဲဖြုတ်ကြခြင်း (နံနက်ခင်း)
ဒေါက်တာတွေဘက်ပဲ ဓါတ်ကျနေသလားမှတ်တယ်။ ဒါရိုက်တာ ၀ိုင်း အကြောင်းကလည်း အမြဲပါတယ်လို့ ပြောရင်ခံရတော့မှာပဲကွယ်။ ၀ိုင်း နဲ့ Heart & Soul ကုမ္ပဏီတို့ လက်တွဲဖြုတ်လိုက်တဲ့ သတင်းက ယနေ့ရုပ်ရှင်လောက ရဲ့ ပွဲအဆူဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်နေတော့ကာ ရွာသူရွာသားတွေလည်း သိထားတော့ ခေတ်နောက်မကျတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ ဟေးဟေး။ နည်းနည်း မိတ်ဆက်ပေးဖို့လိုမလား မသိဘူး။ Heart & Soul ကုမ္ပဏီဆိုတာ မကြာခင်က အကယ်ဒမီရသွားတဲ့ အာဒံရယ် ဧ၀ရယ် ဒသ ရယ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီပေါ့ဗျာ။ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်နဲ့ ခင်စန္ဒာမြင့်တို့ရဲ စပ်တူ ကုမ္ပဏီပါ ကျောင်းဒကာ။ ကဲ နည်းနည်းလေး ဖတ်ကြည့်ရအောင်ပါ။
နံနက်ခင်း ။ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က နံနက်ခင်းမှာ ၀ိုင်းဖြေခဲ့တဲ့ Heart & Soul ကုမ္ပဏီနဲ့ ရုပ်ရှင်ဗီဒီယို မရိုက်တော့ဘူးလို့ တရားဝင်ပြောလာတဲ့ အပေါ် အားလုံးသိချင်တာက why တဲ့။
၀ိုင်း ။ ကျွန်တော် မရိုက်ချင်တော့တာ။ လူဆိုတာက ကိုယ်လုပ်တဲ့ အလုပ်၊ ကိုယ်နဲ့အတူတွဲလုပ်တဲ့ သူအပေါ် တန်ဖိုးထားရတယ်။ ဥပမာ ကျွန်တော့်ကို လေးလေးစားစားဆက်ဆံတဲ့သူ၊ တန်ဖိုးထားတဲ့သူဆိုရင် တစ်မျိုးစဉ်းစားပေးလို့ရပါတယ်။ အခုဟာက အာဒံဧ၀ အောင်မြင်တာ သက်ဆိုင်ရာက အဆင့်ဆင့်ချပေးလိုက်တာကြောင့် လို့ပြောတဲ့အခါ နောက်ကားကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာတွေနဲ့ ရိုက်ရင် အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ ၀ိုင်းနဲ့ ရိုက်ရင် အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်ဘူးထင်လို့ မရိုက်တာလို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲ ပြောပါရစေ။ အဲဒီစကားတစ်ခွန်းကို လုံးဝမကျေနပ်ပါဘူး။
သတင်းက နည်းနည်း နားရှုပ်ရင် ရှုပ်နေလိမ့်မယ် ဗျာ။ ကျွန်တော်နားလည်သလောက်လေး ရှင်းပြပေးမယ်နော့။ အာဒံဧ၀ ရုပ်ရှင် အကယ်ဒမီရတော့ ထုတ်လုပ်ရေးပိုင်ရှင်အနေနဲ့ ခင်စန္ဒာမြင့် က ဆုကိုလက်ခံ ရယူပါတယ်။ အဲဒီမှာ ပြောသွားတဲ့ ကျေးဇူးတင်စကားကို စိတ်ဒဏ်ရာရနေတဲ့ ဒါရိုက်တာဝိုင်း က ဖီလင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီနဲ့ လမ်းခွဲတယ်ပေါ့ဗျာ။ ၀ိုင်းနေရာကနေလည်း ၀င်ခံစားပေးလို့ရပါတယ်။ အဲဒီလို လမ်းခွဲတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ကလည်း ဒီလိုပြောပါတယ်တဲ့ဗျာ။
ကျွန်တော်ဘာမှ မပြောချင်တော့ပါဘူးဗျာ။ ကျွန်တော်က အငယ်ပဲ။ ချစ်စကို ရှည်စေ၊ မုန်းစကိုတိုစေ ဆိုတဲ့ စကားရှိတယ်မဟုတ်လား။ ပြီးတော့ နွားကွဲရင် ကျားဆွဲမယ်ဆိုတဲ့ စကားလည်း ရှိသေးတယ်လေ
စိတ်မကောင်းစရာပေါ့ဗျာ။ ညီညီညွတ်ညွတ်ရှိနေတဲ့ စုစည်းမှုတစ်ခု ဟန်ချက်ပျက်သွားတဲ့ သဘောပေါ့။ ရုပ်ရှင်လောကသားတွေအတွက် သင်ခန်းစာယူစရာပေါ့ ကျောင်းဒကာ။
ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုသစက်နှစ်လုံး ၀ယ်ယူရန် အစီအစဉ်ရှိ (Voice)
ဘာဆန်းလို့လဲ လို့ ခင်ဗျားမေးတော့မယ်မဟုတ်လား။ ဟင်း…ဟင်း… ဆန်းတာလေး ပြောပြမယ်… နားထောင်။
လူဦးရေ သန်း ၆၀ လောက် မှီတင်း နေထိုင်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်ကြီးမှာ ကျန်းမာရေးဘတ်ဂျက်ကို ဘယ်လောက် အရေးထားသလဲ ဆိုရင် (FR ကြီးမသိစေနဲ့နော် တော်ကြာ ပို့စ်တစ်ပုဒ်နဲ့ လှမ်းထုနေဦးမယ်) ကင်ဆာရောဂါ ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုသစက် ဘယ်နှစ်လုံး ရှိတယ်ထင်ပါသလဲ။ အင်း ကျွန်တော်လည်း မသိဘူးဗျ။ ဒါပေမယ့် ကုသလို့ရတဲ့ နေရာ သုံးခု တိတိရှိတာကိုတော့ ခင်ဗျားကို ပြောပြလို့ ရပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေ စာဖတ်သလိုဖတ်ဗျာ။
၄င်းတို့မှာ ၁။ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ၂။ မန္တလေး ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ၃။ တောင်ကြီး စပ်စံထွန်းဆေးရုံကြီးတို့ ဖြစ်ကြပါသည်။
တော်တော်များတယ်ဗျာ။ သေချာ အာရုံစိုက်ပြီး အလွတ်ကျက်ထားနော်။ သူများမေးရင်လည်း ဖြေရတာပေါ့။ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာတဲ့ ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုသစက် စုစုပေါင်း ၄ လုံးရှိပြီး ၂ လုံးမှာ ပျက်စီးနေကာ အင်အားကျ စက်ဟောင်းတစ်လုံးနှင့် စက်အသစ်တစ်လုံးတို့ဖြင့် ကုသနေရကြောင်း အဆိုပါဌာနထံမှ သိရှိရသည်တဲ့။
အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ ဒုက္ခကိုလည်း ကြည့်ဦး။
ရင်သားကင်ဆာ ဓါတ်ကင်ဖို့ စာရင်းပေးပြီး စောင့်တာ ၆ လလောက်ကြာတယ်
တဲ့။ ကဲ ကျောင်းဒကာ။ ဒီကြားထဲ ကင်ဆာမဖြစ်အောင် ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ဗျာ။ အစားအသောက်တွေလည်း ဆင်ခြင်ဦးဗျ။ စက်အသစ်ကြီး နှစ်လုံးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့လည်းကင်ဆာဖြစ်ချင်လည်း ဖြစ်ပါစေပေါ့။ဘာအရေးလဲ။
(၅) ကျပ်တစ်သောင်းတန်ငွေစက္ကူ လတ်တလော မဖြစ်နိုင် (Voice)
ကျပ်တစ်သောင်းတန်ငွေစက္ကူများ ထုတ်ဝေလိမ့်မည်ဆိုသော ကောလာဟာလ သတင်းမှာ လတ်တလောတွင် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာန ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဦးမင်းထွဋ်က The Voice Weekly ၏ ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုကို ဖြေကြားပါတယ်တဲ့ ခင်ဗျာ။
ဓမ္မာစရိယနှင့် ပထမပြန်စာမေးပွဲ မသမာဖြေဆိုသူများကို စာဖြေခွင့်သုံးနှစ်ပယ်မည် (Voice)
အင်း ဒီသတင်းကလည်း အဆန်းဗျ။ သံဃာတော်တွေ ဖြေဆိုတဲ့ စာမေးပွဲမှာ မသမာဖြေဆိုသူများ ဆိုတာက ခိုးချဖြေဆိုတာကို ပြောတာနဲ့တူပါတယ်။ သံဃာတော်တွေကလည်း ခိုးချကြတယ်တဲ့လား။ အို ဒါမျိုးကြီးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျာ။
အမေရိကန် နိုင်ငံ၏ အတန်းအလိုက် သင့်တော်သောလိင်ပညာရေး သင်ကြားပေးရေး မူဝါဒအချိ့ (Education Degest)
နားနဲ့မနာ ဖ၀ါးနဲ့နာပါ ကျောင်းဒကာ။
သူကြီးတို့အမေရိကန် မှာတဲ့ Grade Eight ပြီးချိန်တွင် ကလေးများအနေဖြင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းအကြောင်း တိတိကျကျ သိပြီးဖြစ်ရမည်တဲ့။ လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့် ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်း ဆက်စပ်ပုံများ၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့် လိင်မှတဆင့်ကူးစက်တတ်သော ရောဂါများဖြစ်ပွားနိုင်ပုံ၊ မှန်ကန်၍ အန္တရယ်ကင်းသော လိင်ဆက်ဆံနည်းဟူသည် အဘယ်နည်း စတာတွေကို သိပြီးဖြစ်ရပါမယ်တဲ့။
ရှစ်တန်းအောင်ချိန်မှာကတည်းက သိနေရမှာနော်။ အော် တိတိကျကျ သိပြီး ဖြစ်ရပါမယ်ဆို။ ဟုတ်မဟုတ်ကတော့ သူကြီးသာ မေးကြည့်တော့ဗျာ။ သင့်တော်တယ် မသင့်တော်ဘူး ငြင်းကြခုန်ကြပေဦးပေါ့ဗျာ။
တစ်ခုတော့ ပြင်ဆင်ထားရမယ် ဗျို့။ ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားတို့သားသမီးတွေအတွက်လည်း မြန်မာပြည်မှာ လိင်ပညာရေး မကြာမီ လာမည်လို့ ထင်ရပါတယ်ဗျာ။ တော်ကြာ ဖက်တီးကက်ပြောသလို ကိုယ့်သမီးက သူ့ကောင်လေး အိမ်ခေါ်လာပြီးအိပ်နေမှ ဒေါသမကြီးနဲ့ ကျောင်းဒကာ။ စိတ်လျှော့ စိတ်လျှော့။
မန်းမြို့တော်ဝန် ပြောင်းပြီ (Pupular News)
ကဲ ကိုပေတို့ ကိုပေါက်တို့ မယ်ပုခ်ျတို့ ရဲ့ ပေါက်ပေပု အသင်းကြီး အခြေစိုက်ရာ မန္တလေးရွှေမြို့တော်ကြီးကတော့ မြို့တော်ဝန် အပြောင်းအလဲ ဖြစ်သွားခဲ့ပါသတဲ့ ဗျာ။ ဦးဖုန်းဇော်ဟန်နေရာမှာ အစားဝင်ပြီး စံစားမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့ ဦးအောင်မောင်းပါတဲ့ ကျောင်းဒကာ။ သူကလည်း ခေသူတော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးနဲ့ အခွန်ဝန်ကြီး အဖြစ် ဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်ပြီး မန္တလေးတက္ကသိုလ်ရဲ့ ပါမောက္ခဟောင်း ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ မန္တလေးရဲ့ အနာဂတ် ဦးအောင်မောင်းကြီးလက်ထဲမှာ သာသာယာယာ ရှိပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
ပေါက်ပေပု အသင်းဝင်တွေကလည်း ကိုအောင်မောင်းကြီး ပြောပြန်ရင် လွန်အောင်မလုပ်ကျပါနဲ့ ကွယ်တို့…။
သခင်ဗဟိန်းအုတ်ဂူကို ထိုက်ထိုက်တန်တန်ဂုဏ်ပြုပေးရန် မန်းမြို့မိ မြို့ဖများကို မင်းကိုနိုင်တိုက်တွန်း (Popular News)
မြင်းခွာတစ်ချက်ပေါက်လျှင် မီးဟုန်းဟုန်း တောက်စေရမည် ဟု ကြွေးကြော်ခဲ့သူ သခင်ဗဟိန်း အုတ်ဂူအား မထင်မရှားနေရာမှ မန်းအာဇာနည် ၁၇ ဦးကဲ့သို့ ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဂုဏ်ပြုပေးကြရန် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ တောင်းဆိုချက်ကို မန်းမြို့မိမြို့ဖများက ၈၈ ကျောင်းသားများအား ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ပွဲတွင် ပြောခဲ့ပါတယ်တဲ့ ခင်ဗျာ။
ကဲ ကိုပေါက်ကြီးရေ။ သခင်ဗဟိန်း ကြီးကို ဘယ်နေရာမှာ အုတ်ဂူလုပ်ထားတယ်ဆိုတာလေး ရိုက်ချက်လေးတွေနဲ့ တင်ပြပေးပါဦးလို့ ပွဲတောင်းလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အင်း…အာဇာနည် အာဇာနည်… အော် ဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးဗျာ။
မာရီကိုဗင် အမြှောက်ဆန်ထိမှန်၍ သေဆုံး (Popular News)
ဒါကတော့ ဂီဂီ့ ပို့စ်ကြောင့် အားလုံးသိပြီးဖြစ်ပေမယ့် သတင်းလေးကိုတော့ ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။ ပို လေးနက်သွားအောင်ရယ်ပါ။
အများလေးစားခဲ့ကြသော Sunday Times သတင်းစာကြီး၏ သတင်းထောက် မာရီကိုဗင် (Marie Colvin) နှင့် ဓါတ်ပုံဆုရ သတင်းထောက် ရင်မီအော့လစ် (Remi Ochlik) တို့ နှစ်ဦးသည် ဆီးရီးယားနိုင်ငံ Baba Amr ခရိုင်မီဒီယာစင်တာတစ်ခုတွင် အမြောက်ဆန်ထိမှန်၍ သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
မာရီကိုဗင်သည် အသက် (၅၀) ရှိပြီး Sunday Times သတင်းစာကြီးတွင် နှစ်ပေါင်း ၂၀ မျှ အမှုထမ်းခဲ့ပြီး များစွာသော စစ်မက် ဖြစ်ပွားရာဒေသများသို့ စွန့်စား၍ သွားရောက်သတင်းယူခဲ့သူ အမျိုးသမီးသတင်းထောက်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံအတွင်း ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပြည်တွင်းစစ်သတင်းယူစဉ်ကာလက အမြောက်ဆန်မှန်၍ မျက်လုံးတစ်ဖက် ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
မစ္စတာအော့လစ်မှာ အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ်ရှိပြီး ဟေတီနိုင်ငံသတင်းထောက်ဖြစ်ကာ မကြာမီကာလများက ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော အာရပ်ကမ္ဘာ၏ မငြိမ်သက်မှုသတင်းများကို ရယူပေးပို့နေသူဖြစ်သည်။
မာရီကိုဗင် မသေဆုံးမီ နာရီပိုင်းအလိုတွင် ပေးပို့ခဲ့သော အသံဖိုင်တစ်ခုတွင်
“ဒီကနေ့ ကျွန်မအခု ကလေးငယ်တစ်ဦး သေနေတာတွေ့နေရတယ်။ အမြောက်ဆန်ထိပြီး အသက်ဆုံးရှုံးတာလို့ ဆရာဝန်ကပြောပါတယ်။ ဒါမျိုးတွေ အများကြီး ဆက်ဖြစ်နေဦးမှာပဲ။ အမြောက်ဆန်တွေ တဖွဲဖွဲကျရောက်ပေါက်ကွဲနေတဲ့ ဧရိယာတွေမှာ အရပ်သားတွေ ၂၈၀၀၀ လောက် ပိတ်မိနေတယ်။ ဒါကို အစိုးရကပေးမထွက်ဘူး”
ကဲ ကျွန်တော်တို့ ရွာသူရွာသားတွေ စွန့်စွန့်စားစား သတင်းယူရင်း ကျဆုံးသွားခဲ့တဲ့ မာရီကိုဗင် နဲ့ ရင်မီအော့လစ်တို့ကို အလေးပြုလိုက်ကြရအောင်ပါ။
ကောင်းရာ သုဂတိ လားပါစေ ဗျာ။
ကဲ ဒီတစ်ပတ် ဗဟုသုတ ရဖို့အတွက်ကတော့ သဘက်ခါမှာ ကျရောက်တော့မယ့် တောင်သူလယ်သမားနေ့ ကို ကြိုဆိုသောအားဖြင့် တောင်သူလယ်သမားနေ့ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ ရာဇ၀င်လေးကို ဖေါ်ပြပေးထားပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားသူတွေဖတ်ကြည့်ကြဖို့ပါ။
1.	ဂရန်မြေ (အပိုင်စာချုပ်မြေ)
5.	နယ်သစ်ဖွင့်ဒေသမြေ ဟူ၍ ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။
1.	The Voice Weekly ဂျာနယ်၊ အတွဲ (၆) အမှတ် (၁၇)၊ Monday, March 1-7, 2010 စာမျက်နှာ – အချပ်ပို(a)
မူရင်း https://sites.google.com/site/myanmarsite1/home/ta/taungth မှ ကူးယူ ဖေါ်ပြပါသည်။
ဒီတစ်ပတ် ဓါတ်ပုံ ကဏ္ဍမှာတော့ စက်မှုတက္ကသိုလ် နှစ်လည်မဂ္ဂဇင်းအဟောင်းတွေထဲက ကာတွန်းလေးတွေကို ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
သူကြီးတို့ ကိုနေးချားတို့ ကိုကြီးမိုက်တို့ ကိုကိုသန်ဒါတို့ မမတို့ အန်တီဝေ တို့လို စက်မှုကျောင်းသားဟောင်းတွေ အတွက် အလွမ်းပြေပေါ့ဗျာ။
ကာတွန်းဂျိုကာရဲ့ ကာတွန်း တစ်ကွက်။
ကာတွန်းကျီးကန်း ရဲ့ ကာတွန်းတစ်ကွက်။
ကာတွန်း ဂွရှည် ။
လေချူ ရဲ့ ကာတွန်း။
ဆရာအော်ပီကျယ်ရဲ့ ကျောင်းသားဘ၀ လက်ရာ။
ဘဘဘလက်ရေ ၅ကျပ်တန်ကာတွန်းလေးသဘောကျတယ်ဗျို့ ..
သြော် .. ဟိုအကိုကြီးတွေအတွက် ဘဘဘလက်ဦးစီးပြီး ဂေဇက်ဖူးစာဖက်ရှာဖွေရေး အေဂျင်စီဖွင့်ရင်ကောင်းမလား
တောင်သူလယ်သမားနေ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံ ဒီတေးလ်က စာအုပ်ထဲမှာကျန်ခဲ့ပြီ
သတင်းတွေရော ဗဟုသုတရောစုံလင်တဲ့ ချိုပေါ့ကျ ၃ ကို အားပေးပါ၏
ပြောသလို..ကိုလိုနီ နယ်ချဲ့ တိုင်းတပါးသားလက်ထက်မှာတောင်..သခင်ပေါက်စ
ထောင်နှစ် ၆၀ ဖြစ်တော့တယ်…RITအမှတ်တရ ကာတွန်းလေးတွေပြန်ဖတ်ရလို့ဘည်းကျေးဇူးပါဗျာ
ကိုဘလက်တင်တဲ့ RIT အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံပို့စ်မှာ..သဂျီးလည်းကာတွန်းဘောက်စ်မှာတင်ဘူးတယ်
ကတွန်းတွေထဲက လေချူ ရဲ့ကာတွန်းလေး ကျွန်နော်မမေ့သေးလို့…
ကိုဘလက်တင်တဲ့ RIT အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံပို့စ်မှာဝင်မန့်ခဲ့ပါသေးရဲ့…
(((စည်းကမ်းဆိုတာ စာရွက်ထဲမှာတော့ ရှိသင့်ပါတယ်။)))
ကျုပ်မှတ်မိတဲ့ ကာတွန်းက ဂွရှည်ရဲ့ကာတွန်ဗျို့ေ၇းတာမွှားသွားလို့..
ဂွရှည် ရဲ့ ကာတွန်းက ကိုကြီးမိုက်ကြီး ကွန်းမန့်မှာ ရေးခဲ့တဲ့ ကာတွန်းလေးပါ။
ကိုကြီးမိုက်ကြီး နာမည် ကျန်နေခဲ့လို့ ထပ်ဖြည့်ပေးထားတယ်ဗျာ။
ရေးရတာများလို့ ကျန်ခဲ့တာ ခွင့်လွှတ်ပေးပါဗျာ။
ဘုရားဒကာရေ တရားလေးနည်းနည်း ထောက်လိုက်ဦးမယ်။
တိုက်ပွဲဖြစ်ဖြစ် ယှဉ်ပြိုင်မှုဖြစ်ဖြစ် ကစားတာပဲဖြစ်ဖြစ် အနိုင်ရဖို့ လိုတယ်။ ဦးတည်ချက်ကဘာလဲ။
ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ရလဒ်နဲ့ ဦးတည်ချက်ကို ရအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာ ထည့်တွက်သင့်တဲ့အချက်တစ်ခုက
အထိအခိုက် အပျက်အစီးနည်းအောင် ဘယ်လိုကစားရမယ် ဘယ်လိုယှဉ်ပြိုင်ရမယ် ဘယ်လိုတိုက်ရမယ် အဲသလို အကွက်ဖော်တာကို ဗျူဟာခေါ်သဗျ။ တစ်ပြိုင်တည်းမှာပဲ ရေရှည်လမ်းကြောင်းအတွက် ကိုယ်လိုအပ်မယ့် စွမ်းအားစုတွေကို ဖြည့်ဆည်းရတယ်။ မဟုတ်ရင် ကျဆုံးဖို့များတယ်။ သို့မဟုတ် အောင်မြင်မှုအတွက် ပေးဆပ်ရတာအလွန်များသွားပြီး နှောင့်နှေးတတ်တယ်။
risk ကို မော်ဒရိတ်လုပ်ဖို့ အကျင့်ကဝင်နေလေတော့ အဲဒီအမြင်နဲ့တရားဝင်ထောက်တာပေါ့ဗျာ။
စကားမစပ် Insurance လုပ်ငန်းတွေပေးဖွင့်တော့မယ်ဆိုတော့ Risk Management ကျွမ်းသူများ အလုပ်ကောင်းကောင်းရမယ်ဗျား။ AAII , ACII လက်ထဲကိုင်ထားသူများ ပြည်တော်ပြန်လာရန် အချိန်ကောင်းရောက်တော့မယ်။
” ပေါက်ပေပု အသင်းဝင်တွေကလည်း ကိုအောင်မောင်းကြီး ပြောပြန်ရင် လွန်အောင်မလုပ်ကျပါနဲ့ ကွယ်တို့…။”
အောင်မောင်းက ပြောမှာ မဟုတ်ဘူး..
သူက ခြေထိုးအက နဲ့ နံမယ် သိပ်ကြီးခဲ့တာ..
အခုလဲ ဘယ်လိုခြေထိုး တော်ပြန်ပြီလဲ မသိဘူး
အရေးအသားတွေကလည်းကောင်း ကာတွန်းတွေကလဲနှစ်သက်စရာ ပြည့်စုံပါတယ်ဗျာ
တောင်သူလယ်သမားနေ့ အကြောင်းကို ဖတ်လိုက်ရလို့ ကျေးဇူးပါဗျို့ … ။
အောက်က ကာတွန်းတွေထဲမှာတော့ ငါးကျပ်တန် ကာတွန်းကိုတော့ အကြိုက်ဆုံးပဲ ..
ရည်းစား စကားပြောမှာကို စကားချီးနေတာ လိုက်တာ .. အဟီး .. လိုရင်းမရောက်ဘဲ အဓိပ္ပါယ်တွေ လွဲကုန်ရော …
အင်း .. ဘဝမှာ ဒီလိုတွေလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ် .. ။
၈၈ မျိုးဆက်နောင်တော်တွေကို မိသားစုဘဝလေးနဲ့ ပျော်ရွှင်နေတာမြင်စေချင်ပါတယ်။
ကျေးဇူးပါ ကိုဘလက်ချောရေ။ကာတွန်းလေးတွေ မိုက်တယ်ဗျာ။
စေတနာပိုထားတာလာတဲ့ အတွက် ကျွန်တော်လက်ဖက်ရည်တိုက်ချင်ပါတယ်
မျက်မှန်နဲ့ စတိုင်ပင်ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့လူက သူကြီးရုပ်နဲ့ တပုံစံထဲပဲ ကိုဘလက် မနောက်ဖူး အတည်ပြောတာ..
ဟင်းလေးအိုး ကို အားပေးသွားပါတယ်နော်။ စုံစီနဖာမြိုင်နေတာပဲ။
စက်မှုတက္ကသိုလ်တက်လိုက်မိတာ ဒုတိယအရွယ်ပျောက်သွားတာတော့ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်မှန်ပဲ ..
ယနေ့အထိ တတိယအရွယ်ထဲတော့ ၀င်တော့မယ် စာအုပ်ပုံထဲက မထွက်ရသေးဘူး …
ဆြာအော်ပီကျယ် လက်ရာဟောင်းလေး …
(အော်…ရယ် … ဦးလူပေါ ကျောင်းကလည်း သမိုင်းနားမှာ မလား..)
အုန်းဆံကြိုး မီးစွဲ ကို တွေ့လို့ဗျို့ …
သူတို့ကျောင်းသားဘွက … အုံးဆံကြိုး မီးစွဲ ကို
ဆေးလိပ်မီး တို့ ဖို့ သုံးခဲ့သေးရတာလားဗျာ …???
ကြည့်ဖူးတဲ့ ရုပ်ရှင် သူ့ကျွန်မခံပြီမှာ တီလုပ် စားသောက်ဆိုင် ဘာညာ မှာ
အနှီ အုန်းဆံကြိုး မီးစွဲ ကို ထားပေးတာလေး တွေ့မိလို့ဗျ ….
အော်…..ရယ်. .. မီးခြစ်ကလေးတောင် နှစ်ပေါင်း ၁၀၀လောက်
အင်နိုဗေးရှင်း ကင်းခဲ့ ရှာ သလားကွယ်တို့ ရယ်ပေါ့
ဒါမှမဟုတ်လည်း တခြားတခြားသော အဓိပ္ပါယ် တခုခုနဲ့ တစုံတရာကို ရိထားလေရော့သလား..
ကျနော်လည်း ကျနော့်အသိုင်းအ၀ိုင်းက ..လက်ဆော့ကဗျာလေး တစ်ပုဒ် လက်ဆောင်ပေးချင်ရဲ့ ….
အမည်မသိရှေးစာဆို ရဲ့ လက်ဘ် ထဲက ဘန့်ခ်ျမှာ …ကော်လက်ရှင်ပန် နဲ့ ရေးထားတဲ့လက်ရာ..
(ဟို ကော်ရက်ရှင် ဘာဖြစ်ညာဖြစ်ဆိုတဲ့ ..စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှူးတွေ မလာခင် မြန်မြန်ရေးမှဗျို့….)
ကျောင်းသားဘွ ….ဘာသာရပ်အချို့ ကျလို့ ..ဆပ်ပလီမန်ထွီ ဖြေပြီးမှအောင်ရတဲ့ ဟာသလေးကို ရေးထားတာပါ…
(ဆပ္ပလီ အကြောင်းတော့ ဆြာမ ဂျူး စာထဲပါတာလေး မှတ်မိဦးမယ်ထင်ပါ့…) ဘာတဲ့ ….
ငါက …အဲ့ …ငါက..
လိပ်ခုံး တနေရာစီက …နောင်တော် ဆေးကျောင်းသားများရဲ့ လက်ရာလေးပါ….
အုန်းဆံကြိုး မီးစွဲကနေ.. ဆေးလိပ်မီးညှိတာ.. ကာတွန်းထဲ.. ၂ပုံတောင်ပါနေတယ်…
အဲဒီခေတ်က.. အဲလိုကျောင်းကန်င်တီး ဆိုင်တွေမှာ ထားထားပါတယ်..။
ကိုချောရေ ကိုဗဟိန်းရဲ့ ဂူ မန်းလေးမှာရှိတယ်လို့ မကြားဘူး သေးဘူး။
ဒါပေမယ့် ဒီနေ့မနက်ခြောက်နာရီလောက် တောင်သမန်အင်းနေအထွက်သွားနှက်
လက်ပံပင်နှက် ထန်းပင်နှက်ပြီးအပြန် သန့်ရှင်းထားတဲ့ အာဇာနည်ကုန်းမှာ
88မျိုးဆက်က ပန်းခွေချထားတာ ရိုက်လာတယ် နက်ဖြန်နေ့လည်ကြည့်ပေတော့နော်
ကိုချောရေ- ချိုပေ့ါကျ ကို သောက်ပြီး အီစိမ့်သွားတာပဲ။
ရသာစုံ လက်ဖက်ရည်ဝိုင်းလေး က အိမ်ရှင်ရဲ့ ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုကြောင့်
ဒါထက့် စကားစပ်ပြီးသားမို့ ပြောရဦးမယ်.. ဘယ်က ကာတွန်းတွေမျာ ရလာပါလိမ့်လို့။
ကိုယ့်ဘော်ဒါရေးဆွဲတဲ့ ကာတွန်း တစ်ပုဒ်တောင် ပါလာသေးတယ်။
အဲဒီထဲမှာ သဂျီးဆွဲတဲ့ ကာတွန်း မပါဘူးလို့ မပြောနိုင်ဘူး။
မမရေ ၅ကျပ်တန်ကာတွန်းထဲက မမလားဟင်
ဒါပေမယ့် အဲဒီလို တလွဲတွေးတတ်တဲ့ စိတ်ကတော့ တစ်ပုံစံတည်းပဲ။ ;)
စတိုင်ပင်ထုတ်လို့ရတဲ့ ပိုက်ဆံ ကားဆီဖိုးမလောက်တာ သဂျီးဖြစ်ရမယ်။
“ ဓမ္မာစရိယနှင့် ပထမပြန်စာမေးပွဲ မသမာဖြေဆိုသူများကို စာဖြေခွင့်သုံးနှစ်ပယ်မည် (Voice)….”
တကယ်တော့ စာသင်သားသံဃာတွေ စာခိုးချတယ်ဆိုတာ ကိုလိုနီခေတ်ကတည်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ ပထမပြန်စာမေးပွဲတွေကတည်းကဗျ…။
အဲဒါကို ငယ်ငယ်က ဆရာဘုန်းကြီးကို “ ဦးပဉ္ဇင်းတွေ စာခိုးချတာ အဒိန္နာဒါနကံ မထိုက်ဘူးလားဘုရား..” လို့ မေးလျှောက်ဘူးတယ်။
ဘုန်းကြီးက ဖတ်လက်စကျမ်းစာအုပ်အထူကြီးနဲ့ လှမ်းထုတာ ကြယ်တွေလတွေမြင်သွားတော့တာပဲ။
(မှတ်ချက်။ ။ စာခိုးချတာ ခိုးတာမဟုတ်ပါ။ အဒိန္နာဒါနကံမထိုက်ပါ။ သာဌေယျ အကုသ်ိုလ် သာဖြစ်ပါသည်..တဲ့)
” FR ကြီးမသိစေနဲ့နော် တော်ကြာ ပို့စ်တစ်ပုဒ်နဲ့ လှမ်းထုနေဦးမယ် ”
ကို ဘလက် ချော ရေ
ကို ဘလက် စာတွေကို မလွတ်တန်း ( မလွတ်တန်း ) ဖတ်ဖြစ်ပါတယ် ။
စာတွေက ကို ဘလက် ချော ရဲ့ နာမည်အတိုင်း ၊
ထောက်စရာ မရှိလောက်အာင် ချောမွေ့နေလို့ ၊
Comment မပေးဖြစ်တာပါ ။
ထုံးစံအတိုင်း လက်မလေးထောင်ရင်း ဖတ်သွားပါတယ် ကျောင်းဒကာ ရေ…
ခါနာရိုက်ပြီး ၊ ဗိုက်လေးလေး မျက်မှေးမှေး နဲ့ 
အရသာတွေ ရှိသွားခဲ့ကြောင်းပါ အစ်ကိုကြီး
အမြန်ဆုံးနဲ့ ပထမဆုံးပေးတဲ့ ကွန်းမန့်လေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒေါ်မိုးစက်ခင်ဗျား။
ငါးကျပ်တန်ကာတွန်းလေးက မမတို့ မဝေတို့ကိုများ ရည်ရွယ်ပြီး ရေးထားလေသလား။
ရည်းဇားစကားပြောတာကိုတောင် ပိုက်ဆံလာတောင်းတယ်လို့ ထင်တတ်တဲ့
စက်မှုကျောင်းသူတွေ အကြောင်းရေးထားတယ်လို့ နားလည်လိုက်လို့ပါ…။
အားပေးသွားတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုကျီးမိုက်ရေ။
ကာတွန်းတွေ အားပေးသွားတယ် ဆိုတဲ့ ကွန်းမန့်လေးကိုလည်း
တရားထောက်သွားတာလေး အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျောင်းဒကာ။
မှန်ပါတယ်။ ကျောင်းဒကာပြောသလို တကယ်ကို မှန်ပေမယ့် တချို့ဟာတွေက
လူခြင်းတွေ့မှ အခြင်းခြင်း ပြောကြဆိုကြလို့ ရမှာမျိုးကိုဗျ။
တရားနောက် ဆက်လိုက်ကြသေးတာပေါ့ ကျောင်းဒကာရယ်။
@ နွေဦး ;
မမတို့ရေ ဟုတ်တယ်ဟုတ် ?
ကွန်းမန့် တိုလေးတွေနဲ့ လိုက်အားပေးတတ်တဲ့ ကိုချိုခေါ် ကိုအောင့်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျို့။
ညီလေးရေ။ အားပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါဗျာ။ နောက်လည်း လဖက်ရည်သောက် ကြွခဲ့ပါဦးနော့…။
@ မောင်သန်းထွဋ်ဦး ;
ညီလေးရေ။ ကွန်းမန့်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ။
@ htetvway ;
လဖက်ရည် တိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် ချိုပေါ့ကျလေး တိုက်ဗျာ။
အဲဒီကာတွန်းလေးကလည်း ခေတ်ကို ပြောနိုင်တဲ့ ကာတွန်းမျိုးပါ ပုခ်ျရေ။
လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်က စတိုင်ပင် ရတဲ့ လူတွေက ပိုင်ရာဆိုင်ရာစားနိုင်သောက်နိုင် စီးနိုင်ကြသူတွေပဲ
ဒါကြောင့် ဓါတ်ဆီဘိုးတောင် မရဘူးလို့ ပြောခဲ့တာပေါ့။
သူကြီးကတော့ အဲဒီလို ဖေါက်ပြန်တဲ့ လူတန်းစားမဟုတ်လောက်ဘူး ထင်ပါတယ်။
ဒီကာတွန်းတောင် သူကိုယ်တိုင် ဆွဲထားတာလားမသိ။
ဒုတိယ အရွယ်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် အန်တီဝေရေ။
ငါးကျပ်တန်ကာတွန်းထဲကလို ရည်းစားစကားပြောတာကိုတောင် မခံစားတတ်တော့ပဲ
ထမင်းဘိုးလာတောင်းတယ်လို့ ထင်တတ်တဲ့ စက်မှုကျောင်းသူတွေရဲ့ စရိုက်ကလေးကို
မြင်လိုက်ရလို့ပါ။ ဟီး ။
ညီလေးရေ။ အဲဒီလို အုန်းဆံကြိုးမီးစလေးတွေကို အရေးအခင်းမတိုင်မီက
ကွမ်းယာဆိုင်တွေတိုင်းမှာ ဆွဲထားတတ်ပါတယ်။ အခုကာတွန်းတွေကလည်း
၁၉၈၀ ကျော်ကာလတွေက ကာတွန်းလေးတွေဆိုတော့ ခေတ်ကိုပြန်ပြောပြတဲ့ သဘောပါ။
အရေးအခင်းပြီးသွားတဲ့ အထိတောင် အုန်းဆံကြိုးမီးလေးတွေ ကြိုကြားတွေ့ခဲ့ရပါသေးတယ်။
ရိတာတော့ မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
ကွန်းမန့်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ ညီလေးရေ။
သူကြီး။ ဒီကာတွန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူကြီးသိခဲ့တာလေးတွေ နည်းနည်းပြန်ပြောပြပါဦးဗျ။
ဘယ်ကာတွန်းကတော့ သူကြီးဆွဲခဲ့တာ… ဟီး။
ကိုဘဟိန်းဂူ မန္တလေးမှာ ရှိတယ်လို့ ထင်တယ်ဗျ။
ကျွန်တော်လည်း ဘယ်နေရာလောက်မှာ ရှိတယ် ဆိုတာ ဒီမှာ စုံစမ်းပြီး
ဒီလိုပဲပေါ့ဗျာ။ တင်ပြချင်တဲ့သူဆိုတော့ ရှာဖွေရတာပေါ့။
မမ ဘော်ဒါဆွဲတဲ့ ကာတွန်းက ဘယ်ကာတွန်းလဲဗျ။
ငါးကျပ်တန်ကာတွန်းထဲကလို ရည်းစားစကားလာပြောတဲ့ လူတွေကို
@ ကိုပါလေရာ ;
သံဃာတော်တွေ စာကူးချတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှင်းပြပေးတာ ကျေးဇူးပါ ကိုပါလေရာရေ့။
အပျော်နောက်ထားတာပါ ကို FR ရေ။
အမှန်တော့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာလည်း
ကျန်းမာရေးအတွက် အသုံးပြုတဲ့ ဘတ်ဂျက် က နည်းလွန်းတယ်ဗျာ။
ကင်ဆာဖြစ်တဲ့လူတွေမှာ ဆေးမကုပဲ ထိုင်စောင့်ရင်း အသက်ထွက်ရမလို ဖြစ်နေရတာပါ။
ညီလေးရေ။ သောက်လို့ ကောင်းတယ်ဆိုလို့ ဖျော်တိုက်ရကျိုးနပ်ပါတယ်ကွာ။
စကားမစပ်။ ညီလေး ဘယ်ရောက်နေပါသလဲဗျာ။
@ kotun winlatt ;
ချိုပေါ့ကျ လုပ်ပါ ကိုထွန်းဝင်းလတ်ရယ်။ ချိုပေါ့တော့ မချပါရစေနဲ့။
တစ်ပတ်ကို နှစ်ခွက်လောက်တော့ တိုက်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ် ဗျာ။
တစ်ယောက်တည်းသော ညီလေးရဲ့ တစ်ချောင်းထဲသော လက်မလေးအတွက်
ကွန်းမန့်လေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုပေရေ။
ကိုချော ချိုပေ့ါကျ သောက်ဖို့ ကွန်နက်ဖျော်ကြောင့် ၁၅ မိနစ်လောက်လည်နေတဲ့ အစိမ်းလေးကို ထိုင်ကြည့်နေရတယ်
မကြပ်မိအောင် မပြောတော့ဘူး ဗျာ
မြန်မာပြည်မှာလည်း လိမ်ပညာရေး ရှိထားပါတယ်။ အမေရိကန်မှာက ရှစ်တန်းရောက်မှ သင်ပေးတာ။ မြန်မာပြည်မှာ အဲဒီထက်စောတယ်။
အင်းလွဲလွဲလေးပဲ ကောင်းပါတယ် ကျောင်းဒကာ…။
လိမ်ပညာကတော့ သီးသန့် သင်ပေးစရာမလိုပါဘူး ကျောင်းဒကာရယ်။
အဲဒီ လိမ်ပညာပေါ့ ကျောင်းဒကာရယ်…။
ဒီစာဘယ်သူမှ မမြင်လောက်ဘူးထင်တယ် ..
လုံးဝကို မမြင်ပါဘူး ကိုကင်းရေ။ ဖတ်လို့ ရရုံပါဘဲ။
နောက်ကျ ပြီး မှ ဝင်လာ အားပေး ရ တာ စောဒီးပါ။
ထုံးစံ အတိုင်း အရသာရှိတဲ့ အရေး တွေ ကို အရသာခံ ဖတ်ခဲ့ပါတယ်။
ထူးအိမ်သင် ကို လဲ မျက်ရည်ကျ တာထက်တောင် ပိုတဲ့ အလွမ်းနဲ့ လွမ်းသွားပါတယ်။
“ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှင့် ကိုကိုကြီး”
ထင်တာပြော ရရင် သူတို့ ရဲ့ နှလုံးသား အရေး ကို သူတို့ ရဲ့ ခေါင်းကောင်းကောင်း နဲ့ စဉ်းစားနေကြ လို့ပါ ကိုဘချော ရေ။
ကျွန်မ ကတော့ သူတို့ အကြောင်း ကို သူတို့ ပိုသိမှာမို့ ဝင်မဆွေးနွေး တော့ ပါဘူး။
ဒီမှာ ကြုံတုန်း တစ်ခု ဝင်ပြောချင်သေးတယ်။
ဖော်ဝပ် အီးမေး ထဲ မှာ ဖတ်ရတာ။
ကိုမင်းကိုနိုင် ပြောတဲ့ စကား။ အတိအကျ တော့ မမှတ်မိ တော့ ဘူး။ သဘောက တော့
“ဘီယာ သောက် နေတဲ့ သူတွေ ကို ကြည့်ပြီး သူ လဲ အဲဒီလို လွတ်လွတ်လပ်လပ် လမ်းဘေး မှာ ထိုင်ပြီး သောက်ချင် တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကဲ့ရဲ့ ခံ ရမှာစိုးလို့ မလုပ်ဘူး” တဲ့။
ဘီယာ သောက်လို့ မတင့်တယ် တာမှန်ပါတယ်။
မတော် လစ်မစ် လွန်သွား ရင် ဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ခြား သောက်နေ သူတွေ နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ပြဿနာ ဖြစ်နိုင်စရာ အခွင့် များပါတယ်။
အင်း …. ဒါကို အကြံပေးရရင်တော့
လမ်းဘေး မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ထိုင်ပြီး သောက်လို့ ရတဲ့ လ္ဘက်ရည်ဆိုင် တွေ ဒီလောက်ပေါ တာ။
အဲဒီမှာ ထိုင်သောက် ပေါ့။ ;-)
“ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုသစက်နှစ်လုံး ၀ယ်ယူရန် အစီအစဉ်ရှိ ”
သူများ နိုင်ငံ တွေမှာ မတော်တဆ နှလုံးခုန် ရပ်သွားခဲ့ ရင် ရှော့ရိုက်ပြီး ပြန်နိုးလို့ ရအောင် အတွက် တစ်ချို့သော ရှေးဦးသူနာပြု ကိရိရာ တွေ ထဲမှာတောင် ထည့်ထားပါပြီ။
ကျွန်မ တို့ရဲ့ ချစ်သောနိုင်ငံ ကတော့ ဘတ်ဂျက် က လဲ အားရစရာ ကောင်းလှ တာမို့ အားလုံးမှာ နောက်ကျန်နေဆဲ။ :-(
UK မှာ ၂၀၁၃ ဘတ်ဂျက်
“အမေရိကန် နိုင်ငံ၏ အတန်းအလိုက် သင့်တော်သောလိင်ပညာရေး သင်ကြားပေးရေး မူဝါဒအချိ့”
ဒါကတော့ သူရို့ တိုင်းပြည်မှာ ဆယ်ကျော်သက် တွေ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှု နှုန်း တွေ မတရားတက် လာပြီကိုး။
မကောင်းတာကို မကောင်းမှန်း သိပေမဲ့ လွတ်လပ်မှု အလွန်အကျွံ ရနေသ၍ ဒါမျိုးတွေ ဟာပိုဆိုးလာဖို့ဘဲ ရှိပါတယ်။
ဒါကို ကျွန်မတို့ ရဲ့ ချစ်သော နိုင်ငံ ကို ပြန့်မလာဖို့ အတတ်နိုင်ဆုံး ပညာပေး တားဆီး ဖို့ လိုပါပြီ။
ဒါဟာ ခေတ်မှီ တာမဟုတ်ပါဘူး။ လူ့အရည်အသွေး နိမ့်ကျလာတာ ဆိုတာကို သိဖို့ လိုပါတယ်။
ကျန်တာတွေ ကတော့ ကိုယ်မသိတာတွေ များ နေသမို့ ဝင် မပါတော့ပါဘူး။
တောင်သူလယ်သမားနေ့ ကို စာနွှေးပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကာတွန်း လေးတွေ ရဲ့ လှောင်ချက်၊ ကောင်းချက် ကတော့ မျက်နှာအကြောတွေလျှော့ သွားခြင်းပါဘဲ။
ရီလိုက်ရတာ ဖတ်ဖတ်မောရော။ ;-)
ကိုချောရေ၊ ဒီနေ့ အင်းယားလိပ်က အာစရိယပူဇော်ပွဲမှာ RIT ကာတွန်းဘောက်ကလေးတွေ့ခဲ့တယ်။ ကိုချောပြန်ရေးပြတဲ့ကာတွန်းတွေအပြင် တခြားကာတွန်းတွေလည်း အားကြီးပဲ။ အမှတ်တရပေါ့။ RIT ကျောင်းသာဟောင်းတွေ ၂နှစ်တခါ ကစင်္ကာပူမှာလုပ်တဲ့ အာစရိယပူဇော်ပွဲကို ဒီနှစ်ဒီဇင်ဘာ မှ RIT က သြဘာလမ်းမှာလုပ်မယ်တဲ့။ RIT ကျောင်းသားတွေအတွက်တော့ တော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ သတင်းကောင်းလေးတခုပါပဲ။
အဆောင်တွေလည်းပြန်ထားတော့မယ်ပြောတယ်။ ABCDEF ဆောင်တွေက မိန်းကလေးဆောင်ဖြစ်မယ်။ Gဆောင်က ယောင်္ကျားလေးဆောင်ဖြစ်မယ်ပြောတယ်။
ပညာရေးစံနစ်ကြီးပြန်ကောင်းလာပြီး ကျောင်းသားတွေ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့စာသင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။
ABCDEF ဆောင်တွေက မိန်းကလေးဆောင်ဖြစ်မယ်။ Gဆောင်က ယောင်္ကျားလေးဆောင်ဖြစ်မယ်ပြောတယ်။
အရင်က RIT ကျောင်းသားကြီးတွေကို အားကျတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့နဲ့ ကွာပါ့ ။ ကျွန်တော်တို့ GTC တွေက ဆိုးဝါးတဲ့အစိုးရကြောင့် ဆုတ်ယုတ်သွားတဲ့ခေတ်ရဲ့ ဓါးစာခံတွေပါ။
အလွန်ပြည်စုံသော..စိတ်ရှည်သော..analytical presentation တစ်ခုပါ
ကိုဘလကက်ရော madam ဘလက်ရော နေကောင်းတယ်နော်
ဦးဘလက်ချောရေ စာအရေးအသားရော၊ အတွေးအခေါ်ရောကို လေးစားအားကျမိပါတယ် ကျွန်တော်ဟာ ဦးဘလက်ရဲ့ စာတွေကို ဟိုးအရင်ကတည်းက နှစ်ခြိုက်စွာအားပေးခဲ့တဲ့သူပါ ကျွန်တော့်ကို ဂေးဇက်ရွာသားတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ဖြစ်ချင်လာအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ရွာသားသုံးယောက်ထဲမှာ ဦးဘလက်က တစ်ဦးအပါအ၀င်ပါ ကျန်နှစ်ဦးကတော့ အဘဖောနဲ့ ဦးသစ်မင်းနဲ့ပေါ့ ဦးဘလက်ရဲ့ စာတွေကို စောင့်ဖတ်မယ်နော်